Famahanana trondro | Ny trondro
Ny famahanana ny trondro dia tena zava-dehibe, satria raha tsy mitandrina isika dia mety hiteraka fahafatesan'ny biby noho ny sakafo be loatra. Tokony hotadidintsika fa ny biby dia manana fahazarana mihinana isaky ny manome sakafo azy ireo, ka tsy voafehin'izy ireo ny fihinanana sakafo, noho izany azo antoka fa azontsika novonoina izy.
Ao amin'ity habakabaka ity Ho hitanao ny antsipiriany rehetra ilainao ho fantatra toy ny fandaharam-potoana azontsika ampiharina rehefa manome sakafo azy ireo, rehefa manidy ny hazavana na singa hafa tena manandanja amin'ny fisiany. Ho fanampin'ny karazan-tsakafo na torohevitra hafa tsy maintsy raisintsika.
TRONDRO mihinana mifandraika amin'ny karazana fiaviany izy ireo, raha tropikaly izy ireo, raha rano mangatsiaka sns.
Ny Aquaponics dia rafitra iray izay mampifangaro ny toetra mampiavaka ny kolontsain'ny trondro avy amin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny fiompiana anaty sy ...
Mety misy aquarium anao ary tsy azonao antoka izay hanomezana sakafo ny hazandranoo. An'arivony ...
Mpamatsy sakafo trondro
Raha manana fitoeran-trondro ianao dia mety mieritreritra ny hividy dispenser amin'ny sakafo trondro ary hanadino ny momba ...
Mandra-pahoviana ny trondro no tsy mandeha misakafo?
Amin'izao fotoana izao dia maro ny biby fiompy izay hitantsika fa safidy ho sakaiza miaraka ary ...
Fahanana trondro mivantana
Ny fahasalaman'ny trondro dia ny fihinanana sakafo tsara. Androany dia manana loharanon-karena tsy tambo isaina izahay ...
Sakafo trondro fialantsasatra
ny Encarni hace 11 taona .
Rehefa miala sasatra isika, ohatra izao miaraka amin'ny tetezana na lakandrano izay misy any Espana ary mamela ...
Rahoviana ny hanomezana sakafo ny trondro
Ny trondro dia biby izay tsy mangataka sakafo ary, raha tsy mijery ny aquarium ianao, rehefa zatra ...